Waxaa af-Soomaali u tarjumay: Cabdulfataax M. Cabdulle
Halkan ka daawo sawirada dayax gacmeedka
Dayaxgacmeed ay Yurub dhistey oo magaciisa la yiraahdo Smart-1 ayaa 27kii september saacaddu markii ay ahayd 23:14 GMT, ka shiraacdey (blasted off) Xarunta “Kourou Spaceport” oo laga maamulo adeegga loo dirayo hawada sare ee ku taal French Guiana.
Laba iyo afartan daqiiqadood ka dib, markii la direy dayaxgacmeedkaas ayaa hawl-wadeennadii dhulka ha hagayey waxay sheegeen in qaybtii hawada u duuleysey ee ka tirsaneyd makiinaddii dhulka ka kacdey ay sidii loogu talagaley uga furatey (released) makiinadda inteeda kale (Ariane 5 rocket launcher) oo ay u abbaartey wadiiqadii loo qorsheeyey.
Smart-1 waxaa uu tijaabo ku sameyn doonaa xawliga uu hawada sare ugu soconayo, kadibna wuxuu sawiri doonaa (map) sagxadda guud ee dayaxa dushiisa (lunar body's surface) marka uu soo noqon doono sannadka 2005.
“Mar haddii cir-bixiyeennadu ay hawada sare u bexeen, micnuhu maaha in ay soo heleen wax kasta oo halkaas ka jira oo ay tahay in la ogaado”, sidaas waxaa yiri Prof. David Southwood, oo ah madaxa Hey’adda Sayniska ee Adeegyada Hawada Sare ee Yurub (European Space Agency).
Smart-1 oo ah dayaxgacmeed aan dad saarneyn (unmanned) ayaa soo baari doona in uu “dayaxu” biyo leeyahay iyo in kale. Baaritaankaas waxaa kale oo uu soo uruurin doonaa xog sax ah (precise data) oo ku saabsan kiimikada uu ka sameysan yahay.
Macluumaadkaasi waxay xaqiijin doonaan aragtida ah in dayaxu uu ka abuurmay isku-dhicis (collision) u dhexeysay dhulka iyo shey kale muddo aan sidaas uga fogeyn marki habka ama nidaamka ku wareegidda qorraxda (cadceedda) uu ahaaday.
Laba dayaxgacmeed oo ku hawl leh isgaarsiinta ayaa iyagana garab socdey Smart-1 oo isku mar lala direy. Labada dayaxgacmeed ee kale, mid waxa leh Talafishin laga leeyahay dalka India, kan kalena waxa uu la shaqeynayaa Internet-ka Yurub.